Yesmail Inowedzera External Email Zvinokonzeresa ZveMitambo neMamiriro ekunze Martech Zone
Yesmail Inowedzera External Email Zvinokonzeresa Zvemitambo neMamiriro ekunze
Chipiri, Gunyana 14, 2014 Chipiri, Gunyana 14, 2014 Douglas Karr
Sevashambadziri, tinowanzo funga nezve data revatengi uye hunhu senzvimbo dzakamira senge zera, kodhi yepositi, uye muridzi wemba. Nekudaro, isu tinosuwa pane irwo rwizi rwunoitika zviitiko zvinoitika zvakakomberedza hupenyu hwevatengi. Zviitiko zviri nyore sekushanduka kwemamiriro ekunze zvinogona kuchinja maitiro emutengi uye maitiro ekutenga. Kana chando chiri munzira, semuenzaniso, tingave tichitenga matai matsva kana kuti chando chinofambisa nzira yedu.
Inotarisirwa, inokodzera nguva, uye zvine chekuita nemitauro yekufambidzana inogamuchira yakanyanya mutengi kubatanidzwa. Mishandirapamwe yakakonzerwa inokwana zvese izvi zvinotsanangurwa uye zvinowanzoita zvakapetwa ka2.5 iyo yakavhurika chiyero chebhizimusi-se-senguva dzose mishandirapamwe, uye nekaviri kiyi yavo yekubaya Nekudaro, vatengesi vachiri kunetsekana nekumisikidza uye kuendesa matsva akakonzera mameseji. Yesmail Unokonzeresa Ungwaru inobvumira vatengesi kuti vashandise simba remamiriro ekunze emamiriro ekunze uye zviitiko zvemitambo kumisikidza kwakakonzera mishandirapamwe yeemail iyo inotaura kune avo vavanofarira, nzvimbo, uye nharaunda iripo, mune chaiyo-nguva.
Kazhinji, vanopa rubatsiro emaimeri vanoita kuti mutengi ave nemutoro wekuronga maemail vachishandisa yavo yehurongwa hwekushandisa. Zvakanaka kuona Yesmail Unokonzeresa Ungwaru yakapihwa, ichiita kuti zvive nyore kwazvo kune avhareji bhizinesi kusanganisa zviitiko zvinotangisa mushandirapamwe musanganiswa yavo yekutengesa.
Trigger Intelligence Yemamiriro ekunze
Trigger Intelligence yeMamiriro ekunze inogonesa vashambadzi kuronga misangano yeemail iyo inotumira zvinopihwa apo pre-set mamiriro ekunze anoitika mune imwe nzvimbo yenzvimbo. Mafirita emamiriro ekunze anosanganisira:
Mhepo inomhanya renji
Mamiriro ekunze: kune makore, mhute, mvura inotonhora, chimvuramabwe, mvura, chando, zuva, kutinhira kwemvura
Trigger Intelligence yeMitambo
Trigger Intelligence yeMitambo inopa vashambadziri kugona kuronga email kutaurirana iyo inoendesa kana chaicho chiitiko chemitambo chiitiko chikaitika. Mafirita emitambo anosanganisira:
Nguva (mutambo kupedzisa, hafu yenguva, kota / nguva yekupedzisa)
Mhedzisiro yekupedzisira (kukunda / kurasikirwa)
Pfungwa dzakapihwa (mushure mekubata zvishanu, mushure me5 chinangwa, mushure memabhasikiti zana, nezvimwewo)
Tags: email inotangaemail email inokonzeresaemail email inotangahongue-mail inotumirayesmail chinokonzeresayesmail trigger ungwaru
Iyo Yakanakisa Yemunhu Kugovana Bhatani Plugin yeiyo WordPress
Ruzivo Runoyemurika rwekuti Nzvimbo-Yakavakirwa Njere Inobatsira Sei Kushambadzira Kwemotokari